မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths XLIX | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Business & Economics » မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths XLIX
မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths XLIX
Posted by Kyaemon on Jun 18, 2017 in Business & Economics, Education, Think Different, Think Tank |0comments
ရေကာတာလုပ်လို့တရုပ်ပြည်ကမြစ်အခရာ ရ စင်းကမြစ်ကောခဲ့ပြိ ဆိုပြီး
မြစ်ဆုံကအမှားနဲ့အမှန် # ၃၁ မှ # ၃ရ ထိေဆာင်းပါးတွေမှာ ဦးထွန်းလွင်ရဲ့လွဲမှားတာတွေ
ဥပမာTaan Lwin ဆိုသူတင်ပြတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကဦးထွန်းလွင်တင်တဲ့ဓာက်ပုံနဲ့တူတယ်
Tann Lwin အဲဒါ တယုတ်ရဲ့အကြီးဆုံးယန်စီမြစ်ပဲ
သိလဲမသိဘဲနဲ့သူများ (Po Wer )ကိုဆရာလိုက်လုပ်နေတာပါ၊
အဲဒါက ရန်ဇီ မစ်မှမဟုတ်တာ၊ လွဲချော်မှားယွင်းနေတယ်၊
မတတ်ဘဲနဲ့ဒေါနဲ့မောနဲ့ဆရာကြီးTaan Lwin ရယ်၊)
Tann Lwin အဲ့ဒီရန်စီမြစ်ပျက်စီးတဲ့ အားနည်းချက်တွေ
ကြည်လင်တဲ့ မင်းမျက်လုံး မင်းအသိ
ငြင်းချက်တွေ ထုပ်ပြစမ်း ဟိတ်ကော (ဟိတ်ကောင်)
တိုင်းပြည်အရေးမှာ မောဟတွေ နဲ့ဆို ငါးပါးမှောက်တော့မှာဘဲ၊
Tann Lwin ဧရာဝတီ အဲ့လိုဖြစ်ခဲ့ရင်
ခြောက်လှန် ့မဲ့ အိပ်မက်ဆိုးတွေနဲ့
aung aung ဆိုတဲ့ ပညာရှိကြီးရေ။
သမိုင်းတရာခံဖြစ်စရာ မ ရှိပါ၊
ဧရာဝါတီက ရသတ္တဝါတွေ ကိုပြုန်း တီးအောင် မ လုပ်ပါ)
Taan Lwin ရဲ့ပုံတွေဟာ မိုးဇလ ညွှန်ချုပ်ဟောင်းဦးထွန်းလွင်ရဲ့ youtube ကပုံတွေ
ဦးထွန်းလွင်ရဲ့ အောက်ပါပုံတွေမှာ မှားမှားမှန်မှန် မှတ်ချက်တွေရှိတယ်။
Taan Lwin ရဲ့ပုံတွေကျတော့ ပုံအတွက်မှတ်ချက်မပါ၊တဘက်သားကိုလိုက်ဆရာလုပ်တာဘဲပါတယ်
နှိုင်းယှဉ်လေ့လာနိုင်အောင် ဦးထွန်းလွင်ရဲ့ပုံတွေကို တင်လိုက်တယ်၊
မတူကွဲလွဲတာတခုရှိတယ်၊ “တံတားပါတဲ့ပုံ” က မြစ်ကို ဦးထွန်းလွင်က“ မြစ်ဝါ” ပါလို့ပြောပါတယ်၊
Taan Lwin ကျတော့ “ဒီတံတားပါတဲ့ပုံ”က မြစ်ကို “ရန်ဇီမြစ်” ပါလို့ တကွဲစီ မဟုတ်မဟတ်ေြပာပါတယ်၊
“တံတားမပါတဲ့ကျန်ပုံ “က ရန်ဇီမြစ် “လို့နှစ်ဦးစလုံးပြောကြပါတယ်၊
တိတိကျပြေါရရင် သူတို့ နှစ်ဦးစလုံး မှားနေပါတယ်၊
“ပိုယန်”Po Yang ရေကန်ကြီးပါ၊ ရေကန်ကြီးကိုမြစ်ဆိုပြီးအတင်းဆွဲပြောတာပါ
(တရုပ်သတင်းဆာဗစ် အ ရ Henan ပည်နယ် မစ်ဝါ မှခြောက်သွေ့တဲ့တနေရာ)
ဒိအပြင်Taan Lwin ဖီး သလိုရန်ဇီမြစ်လဲ မဟုတ်ပါ၊မြစ်ဝါပါ
(နေ့စဉ်ပေါက်ကရ” သတင်း ဆိုင်းဘုဒ် အောက်ကအဲဒီတာကသူ့သ
တင်းထောက်ကိုပြောတာက ” သေချာမှတ်ထား၊ခင်ဗျားယုံရင်ပြီးတာဘဲ၊
ချဲ့ကား (လိမ်ညာ) တယ်ဆိုတာ မဟုတ်တော့ပါ (အာဘတ်လွှတ်သွားပါတယ်)”
” တံတားမပါတဲ့ပုံ ” ကPo Yang ပိုယန်ရေကန် ကပါ၊တရုပ်ပြည်Jiangxi နယ်
([ ၂၀၀၇]နိုဝင်ဘာ၂၆ရက် ကပုံပါ)
မှတ်ချက်၊ ရန်ဇီမြစ်လို့မ ရေးထားပါ၊
နံမယ်ကိုက ပိုရန် ကန်၊ မြစ်မဟုတ်ပါ။
၂၀၀ရ နှစ်ကုန်လောက်မှာ အဲဒီ ပိုယန်ကန်က ရေးနဲလာလို့
ဥပမာ အင်းတော်ကြီးကန် ကရေနဲလို့ ဧရာဝတီကလဲမြစ်ကောတယ်
ပိုယန် ရဲ့ဧရိယာက ၁၆၉၉ စတုရန်းမိုင်ဆိုတော့အင်းဒေါ်ကြီးရဲ့ ၁၅ ဆ နီးပါး ရှိပြီး။
၊နဂိုရ်ကချောင်းမြောင်းများစွာမှ ရခဲရေမိုးရေတွေရတဲ့အပြင် နာက်ပိုင်းတွင်သိပ်မဝေးလှတဲ့
ရန်ဇီမြစ်ကောရင် Three Gorges Dam မှသိုလှောင်ရေတွေကို ပိုယန်ကန်ဆီသို့ ဘယ်လိုပို့လို့ရမလဲ?
“(အကောင်က)ဒီလောက်လဲမကြီးဘဲနဲ့ (ပုံကြီးချဲ့မနေနဲ့။ ”
ရန်ဇီတို့မြစ်ဝါတို့က “ကော” ချင် “ကော” မယ်၊
အာက်ပိုင်းတနေရာရာက တခါတလေ ရနဲခြောက်သွေ့ တာနဲ့ဘဲ၊ ဒါတွေကို
“ကွက် ကွက်ပြီး”လက်ညှိုးထိုးကာ ” ကာမယ် ကာမယ်”လို့ အာ်နေတာက မှန်ကန်ပါ၏လော?
ပိုယန်ကန်က ခြောက်သွေ့ချိန်နဲ့ တခါတခါ ရင်ဆိုင်ရသလို ၊ရေပြည့်စုံတဲ့ မိုးရာသီတွေနဲ့အခါအားလျော်စွာ ကြုံတွေ
(ပုံကို Click ဂလစ် လုပ်ရင် ပုံအကြီးကြည့်လို့ရတယ်)
ရေကန်ကြီးနားကမြို့ကြီး၊ရေကြီးလို့ စက်နဲ့မြေဖို့၊ရေရှားချိန်မှာမိုးရွာအောင် မိုးတိမ်ဆီ ဓာတ်ဆေးတွေကို
(၂၀၀ရ ပိုယန်ကန် တနေရာ က ပုံကိုဘဲ “ကွက်” ပီး “ဆွဲပြော” “ဋီကာ”ချဲ့နေ တာထင်ရှားတာပါ
ကြွက်သေတခု၊ အရင်းပြု၍၊ကြွယ်မှုထက်ဆုံး၊သူဌေးထုံးလို ဒီခေတ်ကပုံ တခု နဲ့လဲအလုပ်ဖြစ်တယ်မဟုတ်လား၊
မြန်မာ၊ Brazil, US မှာခြောက်သွေ့နေတဲ့ပုံတွေ
April 27, 2016 1:40 AM
တရုပ်ထက်အိန္ဒိယ။မြန်မာ၊ Australia ကပိုပြီးပူလှောင်
ဦးထွန်းလွင် ပြောသလို မဟုတ်ပါ။ ရန်ဇီကမကောပါ၊
( ဆးထိုးအပ်ချောင်းကဒီလောက် ကြီးရှည်တာ)
ဓာတ်အားလာဘို့ညအိပ်ပျက်ခံပြီးလာတာနဲ့ရေစုတ်စက်နဲ့အလုအရက်ရေတင် ဒုက္ခရောက် တာရိုးနေပြီ။
ဂျန်နရေတာနဲ့ရေရလာတဲ့အိမ်ဆီသွားပြီး ရေအလှူခံရယူဘို့နေပူ ကြဲကြဲမှာတန်းစီနေရတာကိုတောကြောင်တွေက
By Shwe Yee Saw Myint Â Monday, 02 May 2016
အပူကြောင့် ၈၉၅ ဦး သေ
၁၁ရ ဒီဂရီ ထိတက်နိုင်
The heat wave is bearing down on elderly Yangon residents and claiming lives, according to the Free Funeral Service Society.
ရန်ကုန်မြို့နယ်ဒလဘက် ရအလှူခံ ဘို့ရေပုံးတွေနဲ့နေပူကြဲကြဲ (heat wave ၁၁ရ ဒီဂရီ နီးပါး)
မှာ စီတန်း အလုပ်ပျက်
Residents of Yangon’s Dala township gather with buckets to wait for donor-supplied drinking water on April 28. Most of the township’s lakes and ponds have dried up, leaving families to depend on water donations. Photo: EPA
Every year the organisation gets an increase of clients needing their services during hot season. While the total deaths the society has assisted with this year is not as high as last year, 895 compared to 899, the group attributes the difference to other organisations helping to provide funeral services this year.
သဘာဝ (အပူဒဏ်) သဘာဝ မှ သာက်သုံးရေ
မ ရလို့ဒုက္ခဆင်းရဲဒဏ်အလူးအလဲ ခံရတာ (၉၀ဝနီးပါးသေ)
သဘာဝ ကိုချည်းဘဝအပ်နေတာလွန်ပါတယ်၊ နှစ်ထိုင်း ဒီလိုဘဲစခန်းသွားမလား?
Elderly residents in Yangon are particularly vulnerable to the heat, with disease or underlying health issues exacerbated by the high temperatures, according to Ko Ye Thwin Tun,aspokesperson for the FFSS.
One of most intense heat waves to hit Southeast Asia has caused record-breaking temperatures across Myanmar.
In several cities the mercury has been threatening to break the all-time heat record for Myanmar of 47.2° Celsius (117 degrees Fahrenheit), which was set in Myinmu, Sagaing Region, on May 14, 2010. .
“I am seeing more heat-related problems this year,” he said.
Myanmar: Heatwave kills 230
Death Rate of Elderly, Children Rising with Temperatures
By LAWI WENG Monday, May 17, 2010
Record temperatures in Burma have led to an increased number of deaths among children and the elderly in Rangoon and Mandalay townships, according to social workers.
Speaking to The Irrawaddy on Monday, actor Kyaw Thu, who works with the Rangoon-based charity Free Funeral Services Society (FFSS), said that organization provides funerals for about 70 peopleaday now: “The number of deaths in Rangoon increased after the high temperatures started in April. Before April, between 40 and 50 died daily.” FFSS provides free clinic and funeral services in Rangoon. …….
About 200 people die daily now at the main government public hospital in Mandalay, according toasocial worker in Mandalay.
“Many patients come to the hospital and there is no accommodation for them to stay. The medics let them stay outside,” he said. “The funeral car also isn’t allowed to enter the hospital area because there are crowds of people.”
One source said that some funeral service businesses haveashortage of cars and some people are using Hilux transport to carry bodies toafuneral service or cemetery.
Due to the extreme temperatures, many people have suffered dehydration and heat stroke. Temperatures in Rangoon, Pegu and Irrawaddy divisions and in central Burma have reached three-decade record highs of up to 45 degree Celsius, according to official reports.
The excessive heat has dried up water ponds in many villages, leading toashortage of water for drinking and hygiene. Many communities in need have received emergency water supplies from volunteer workers.
မန်းလေးမှာ ၂၃ဝ သေ
Myanmar: Heatwave kills 230 in Mandalay – Myanmar | ReliefWeb
Myanmar: Heatwave kills 230 in Mandalay
ReportÂ from Democratic Voice of Burma
Published on 20 May 2010 Ã¢â‚¬â€ View Original
By AYE NAIA near unprecedented heatwave in Burma that has pushed temperatures as high as 47C over the past fortnight continues to claim lives across the country.
Myanmar: Scores die in relentless heatwave – Myanmar | ReliefWeb
The death toll fromanear unprecedented heatwave in Burma is rising as the government warns against exertion and consumption of alcohol.
Temperatures in some parts of the country have risen to 47C atatime when Burma is suffering fromasevere water shortage and frequent power cuts. Residents in multi-storey buildings say they cannot pump already depleted water supplies to their apartments, while fans and air-conditioning are often inoperable….
Kyaw Thu,awell-known actor and director of the charity group, Free Funeral Service Society, said the number of funerals the group is conducting has risen from 50 to around 70 each day. …
State-run newspapers on Friday reported that seven of 11 patients submitted to Taungdwingyi hospital in Magwe division earlier this month with heat-related illnesses have died. An official at the Mandalay General Hospital told DVB under condition of anonymity that 12 of the 20 patients with similar conditions had died.
အိန္ဒိယ မှာ အပူပြင်းလှိုင်းကြီးရိုက်ခတ်
ယခင် နှစ် က ၂၄၂၂ ဦး အပူဓဏ်ကြောင့်သေ
Deadly Heat Wave Sweeps Through India
FILE – An Indian women stands in front of an air cooler to cool herself onahot summer day in Hyderabad, in the southern Indian state of Telangana. The equatorial Pacific OceanÃ¢â‚¬â„¢s climate cycle El Nino effect,awarming of sea surface temperatures that occurs every few years, is getting much of the blame for the heat wave and drought….
Death toll from the heat expected to rise
Last year, “India heatwave officially killed 2,422 people,” the country’s highest heat-related death toll in more than two decades.
Myitsone Myths and Truths VIII myanmargaazette.net224183 bottom section’s extracts
(From MMTimes article)
The truth behind the blackouts
By Aung Shin | Friday, 06 May 2016
So Myanmar needs 280MW more power.
The problem, they said, is that the countryâ€™s total electricity needs this summer are 2730MW, while the combined power generated by all the stations is only 2450MW.
လိုအပ်တဲ့ ၂၈ဝ MW ကို မြစ်ဆုံမှဈေးသက်သက်သာသာနဲ့ရနိုင်